vendredi, 30 décembre 2016 10:05
Antokom-pinoana APOKALYPSY : Tsy hilatsaka ho fidiana i Pasteur Mailhol
Manizingizina ny filoha mpitarika Pasteur Mailhol fa tsy hirotsaka ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana amin'ny taona 2018 ho avy izao ary manambara fa diso avokoa ireo rehetra fanosoketana azy ireo, anisan'izany ny mahakasika ireo fiara izay eo am-pelatanany.
jeudi, 29 décembre 2016 16:55
“Bois sacré”-Mahajanga : Voasambotra i Fabiano nanendaka mpivarotra fahana
Ny alin’ny 24 desambra 2016 no nanafika mpivarotra fahana teo “Bois sacré”-Mahajanga i Fabiano sy ny namany. Kitapo kely nisy vola mitentina 400.000 Ariary no lasan’izy ireo ary naratra voatsatoka antsy ny tongotr’ilay ramatoa. Voasambotry ny Zandary niaraka tamin’ilay kitapo kely nisy ny vola i Fabiano, mitohy ny fikarohana ireo namany.
jeudi, 29 décembre 2016 14:33
Fianarantsoa : Fihaonamben'ny mpisehatra amin'ny asa aman-draharaha katolika
Tanterahina ao amin'ny katedraly Ambozontany ny fihaonamben'ny mpisehatra amin'ny asa aman-draharaha katolika eto Fianarantsoa.Lamesa tarihin'ny Monsenera Fulgence Rabemahafaly, Arsevekan'i Fianarantsoa no nanombohana izany ity marain'ny Alakamisy 29 desambra ity.
jeudi, 29 décembre 2016 10:41
Misy fety karakaraina eny amin’ny village de la Francophonie Andohatapenaka izay efa nanomboka ny talata teo ka hifarana rahampitso zoma. Ahitana kilalao maro ho an’ny ankizy ary toerana hisakafoanana sy hisotroina izay efa voahomana tsara sy lavorary avokoa eny. Marihina moa fa dia 1000 Ariary ny vidim-pidirana amin’izany .
jeudi, 29 décembre 2016 10:25
Ambatondrazaka : Niampy iray indray ny onjam-peo tsy miankina
Misokatra ao Ambatondrazaka ny onjam-peo Akon’Alaotra izay raisina amin’ny maridrefy 88.4Mhz. Enina mianadahy no mampiodina ny onjam-peo amin’izao, tarihin’ny tale Rafidiarimanana Christian.
jeudi, 29 décembre 2016 10:23
Ambatondrazaka : Lehilahy iray 50 taona, matin’ny hanoanana
Mirenireny ao an-tsenan’Ambatondrazaka no handaniany ny fotoanany. Mangataka no ihinanany sakafo sy isotroany toaka. Teo amin’ny tsena Ambatondrazaka izy no niala aina ny tolakandron’ny alatsinainy 26 desambra. Ny Fokonolona avy eo no nandray andraikitra tamin’ny fikarakarana ny razana.
jeudi, 29 décembre 2016 10:19
Toamasina : Vita hatreo ny delestazy
“Sahiko ny manome toky ny mpanjifa eto Toamasina fa tsy atahorana intsony ny delestazy eto, matoa misy ny fahatapahan’ny herinaratra dia resaka teknika sy fanatsarana ataon’ny Jirama ireny …”, izay no nambaran’ny talem-paritanin’y Jirama Toamasina Veloson Léonard. Nomarihiny fa mihoatra noho ny filan’ny mpanjifa eto Toamasina ny herinaratra misy izao, raha 24,350 MW isan’andro ny filan’ny mpanjifa eto Toamasina sy ny manodidina dia mamokatra herinaratra 34,540 MW ny Jirama izao.
mardi, 27 décembre 2016 16:00
Fianarantsoa : Miakatra an-tanàna mamalifaly ireo mpanafana lanonana avy any ambanivohitra
Manao ny famalifaliana ny olona amin'ny alalan'ny fomban-tany ireo mpanafana lanonana avy any ambanivohitra eto an-tananan'i Fianarantsoa amin'izao fotoana izao. Toy ny vakodrazana rehetra dia mbola voatazona izany fomba fanao isaky ny asaramanitra izany. Mitety tsena sy toerana misy havorian'olona izy ireo, mandalo toeram-piasàna ihany koa. Ary mandray hasin-tanana rehefa nahavita ny hira roa na telo. Mbola voahaja izany fomba izany eto an-toerana.
mardi, 27 décembre 2016 13:25
Ambatondrazaka : Ritra tanteraka ny soliky ny Jirama, tapaka nanomboka tamin’ny 4 ora maraina ny jiro
Hatreto tsy mbola tonga ny anjara solika ho an’ny Jirama Ambatondrazaka, miankina amin’izay no hiverenan’ny jiro raha tsy manome trosa ny mpaninjara solika eto an-toerana.
mardi, 27 décembre 2016 13:23
Tahirin-tsary Sobika Fianarantsoa
Fianarantsoa : Naharitra 14 ora ny fahatapahan-jiro omaly alatsinainy
Ny mpitondra mangina tsy ahitan-teny, ny Vahoaka miaritra. Tsy nisy asa aman-draharaha vanona teto Fianarantsoa omaly vokatry ny delestazy.
Page 333 sur 457